Japana: Ny hafatra farany napetraky ny mpandrindra Sarimihetsika Japoney Satoshi Kon · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2010 21:57 GMT
Nodimandry noho ny homamiadan'ny sarakaty tamin'ny 24 Aogositra teo ny mpandrindra Sarimihetsika Japoney Satoshi Kon, ary very mpamorona mahay maminavina ny hoavy iray izao tontolo izao. 46 taona izy io nindaosin'ny fahafatesana io. Araka ny tweet-n'i jbetteridge:
Tsy hoe hiova ny sarimihetsika japoney noho ny fahalasanan'i Satoshi Kon. Ankehitriny dia mety hitovy avokoa ny sarimihetsika japoney.
Namoaka ny teniny farany tamin'ny vohikalany ny 25 teo ny vadin'i Kon, “Sayonara (Veloma)” . Lahatsoratra lava izay manomboka amin'ny nilazana tamin'izy mivady tamin'ny volana May fa manana enimbolana hiainana i Kon, sy ireo fitantarana ny fanapaha-keviny hiatrika izany anjarany izany ao an-tranony, ny zava-niainany teo ambavahoanam-pahafatesana, ny fitiavana sy ny fanohanan'ny vadiny, ireo mpiara-miasa sy ireo namana, sy ny sarimihetsikany iray tsy vita Yume Miru Kikai (Ilay Milin'ny Nofy).
Ny mpanoratra Makiko Itoh nandika ity lahatsoratra rehetra ity tao amin'ny blaoginy no nilaza:
Satoshi Kon, ny mpandrindra ireo sarimihetsika japoney Perfect Blue, Tokyo Godfathers, Millenium Actress ary Paprika, sy ny sarimihetsika amin'ny TV mitohy Paranoia Agent, dia nodimandry tamin'ny Talata 24 Aogositra teo amin'ny faha 46 taonany. (NY Times obituary.) Namela dosie lava nefa miavaka izy, izay navoakan'ny fianakaviany taorian'ny nahafatesany.
Ireto no teny faran'ny artista tena mahay izay nahafantatra fa ho faty aloha loatra izy, niaraka tamina asa tsy vita. Lasa resaka tany amin'ny aterineto japoney izany, ary tena nikapoka ahy mafy.
Ireto misy famintinana vitsy:
“Maninona raha tsy miezaka manohy ny fiainako amin'ny fepetrako manokana!” Na dia izany aza, tahaka ny zava-misy rehefa miezaka mamorona asa [sarimihetsika] aho, ny olon-tokana tsy mahavita ny asa. Ny aretina mihamivoatra isan'andro.
Rehefa mieritreritra ny tarehinareo aho, fahatsiarovana tsara ihany no ananako ary tadidiko ireo tsiky mahafinaritra (anareo). Ianareo rehetra, misaotra anareo aho tamin'ireo fahatsiarovana tena tsara rehetra. Tiako ny tany niainako. Ny fieritreretana izany ihany dia efa mahafaly ahy.
Amin'ny foko feno fitiavana ho an'ireo olona tsara fanahy rehetra eran-tany, apetrako ny peniko. Amin'izao mialatsiny aho, tsy maintsy mandeha aho.
Nitweet i Itoh fa misy ihany koa ny dikateny amin'ny teny Alemana . Namoaka ireo naoty amin'ny teny hafa sy amin'ny kolon-tsaina hafa mikasika ireo teny faran'i Satoshi Kon ihany koa izy.
Ny hafatra faran'i Satoshi Kon dia nivezivezy tany amin'ny tontolon'ny Twitter satria dia nanako tany amin'ireo mpankafy marobe ny hafany. @SAKAI_Kenzi:
先日亡くなった今 敏監督、余命宣告を受けていたんですね。オフィシャルサイトKON'S TONEの、長い長い最後の投稿を読んで、自分の死に冷静に向き合う姿勢に目頭が熱くなった。「死ぬための準備」僕にはできそうにない。http://bit.ly/asvCKo
Tsy takatry ny eritreritro hoe efa fantatry ny mpandrindra Satoshi Kon fa voaisa ny androny. Namaky ny hafany lava, tena lava, farany tao amin'ny vohikala ofisialiny, KON's TONE. Nampitomany ahy ny fahavononany hiatrika ny fahafatesany . Miomana ho faty… Tsy mihevitra hahavita izany aho.
Namerina namaky ny hafatra faran'i Satoshi Kon indray aho. Toa mahatalanjona ny filozofian'ny olona ho faty, kanefa izany no fomba famoronan-kevitra izay tamin'ny “fahalasan'i Satoshi Kon” araka ny fomba nandrafetany ny sehatra izay mampisy fiovana ato amiko. Tena mpamorona tokoa izy hatramin'ny farany. Ny hany azoko atao dia ny manantena ny hiaina sy ho faty tahaka azy.
@dienojibigboss, mampitaha ny iray amin'ireo tweets-n'i @konsatoshi:
Herinandro talohan'ny nahalasanan'i Satoshi Kon, nitweet izy hoe “na izany aza, ataovy”. Tsy mety mijanona ny ranomasoko. Mianiana aho, hanao izay tratry ny heriko ihany koa aho. Na ho sarotra aza izany…. “na izany aza, ataovy”.
Iray amin'ireo asa tena malaza nataon'i Kon ny Paprika, sarimihetsika izay hifangaroan'ny nofy sy ny zava-misy, nivoaka tamin'ny 2006. Manome jery maimaika ireo sarimihetsika nataon'i Kon i James Leung:
Rehefa nivoaka ny Paprika, dia nahatratra ny farafahalaviran'ny fahefany ho lasa mpandrindra sy mpampihetsika i Kon. Nanomboka nampiasa ny fitantarany tsy mizotra tokana tahaka ny kankana mba hirotsahany amin'ireo fitantarana saro-takarina sy sarotra. Noho izany, ny fahalasanany dia toa mbola vao maika fahaverezana be eo amin'ny indostrian'ny sarimihetsika japoney. Tsy voaeritreritro akory ireo zavatra maro nety mbola vitany. […] Ny fiainan'i Satoshi Kon dia afaka atambatra amin'ny fitanisana malaza ny Paprika, ny mpamorona Tokita dia nanamarika, “Moa tsy mahafinaritra ve izany? Ny fahaizana mijery ny nofin'ny namana dia tahaka ny mijery ny nofinao manokana. Mba hizara nofy mitovy.” Misaotra anao nizara ireo nofinao taminay . Alahelo anao izahay ry Satoshi Kon.
Nijery ny Paprika nandritra ny faran'ny herinandro i @susan0smith1985:
Vao avy nijery ny “Paprika” aho. Tena sarimihetsika mahatalanjona. Mihevitra aho fa ireo sarimihetsikan'ny mpandrindra Satoshi Kon dia mikasika ny fahazoana tsy nahy ny zavatra tsy voamarika, raha tokony handinika ny zavatra miseho. Any amina fiaraha-monina miara-belona izay mifangaro ny zava-misy sy ny zavatra foronina, dia mahazatra raha lasa very any anaty ranomasina izay rotsirotsian'ny onjan'ny fahalalana. Indraindray, ilaina ny mijanona kely ary manontany ny tenanao, “Inona no tena manan-danja kokoa?”.
Ohagi ao amin'ny Anipression, vondrom-blaogin'ireo mpitoraka blaogy mikasika ny sarimihetsika japoney, mahatsiaro ny fotoana voalohany nahitany sarimihetsik'i Kon ary manao veloma.
Ny fijerevana ny “PERFECT BLUE” no tahaka ny nanokatra ny masoko. Mbola tsaroako toa fanimpanina aho avy nijery ilay sarimihetsika. Tamin'izany fotoana izany (1998), nijery sarimihetsika japoney betsaka aho ary nihevitra fa maro ny fahafahana hahatonga ny sarimihetsika japoney ho mpanelanelana amin'ny fitenenana. Ary ny famolavolana ny antsipiriany sy ny hatsaran'ny tantara antsary izay tena mahery tao amin'ilay sarimihetsika dia tena ilay notadiaviko amin'ny fiteny hoe “ny mety hisian'ny sarimihetsika japoney vaovao”. Tadidiko fa tokony hanarangarana an'iny mpandrindra iny aho.
Sarin'i Satoshi Kon tamin'ny 2007 avy amin'ilay mpampiasa Flickr Aaron Webb, CC by NC SA
Raha matetika no mifototra amin'ny boky na ny nakana hevitra avy amin'ny tantara mitohy amin'ny TV ny sarimihetsika, i Satoshi Kon kosa dia namorona ny sarimihetsika izay mifototra amin'ny fahaizan'ny tsirairay nandritra ny folo taona lasa. Tsy vitan'ny hoe “voalohany” fotsiny ihany izy, fa “izy irery ihany”. Mihevitra aho fa izany no nisarika ny manan-talenta [mpitendry zava-maneno] tahaka an'i Susumu Hirasawa sy ireo mpampihetsika mahafinaritra hafa, sy mitondra ny fivoahan'ireo asany mifanarakaraka sy amin'ny kalitao tena raitra. Ny fahaverezan'ny fandrosoana, ny fandrindrana mitondra fiovana izay novinavinan'i Kon ho an'ny sarimihetsika japoney dia tena mampalahelo ahy.
Mety ho mariky ny fahatsaran'ny asany izany, ho an'ny tany mba halahelo izany fahaverezana izany. Ny zavatra iray azontsika atao dia ny manoro hevitra ny namantsika izay te hijery sarimihetsika japoney fa mahaliana ireo asan'i Kon. Ampitapitao ny teny navelan'i Satoshi Kon ho antsika. Ary farany kanefa zavatra manan-danja, tsarovy ny hafany.
7 andro izaySingapaoro